Voices Archives - Hintharmedia
ပါတီနှင့် လူအကြားမှ အားစမ်းပွဲ
Ethnic Voice July 28, 2017
မွန်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်း - ဦးဥက္ကံသ “မွန်အမျိုးသားပါတီကနေ ဒေါက်တာမင်းစိုးလင်း ထုတ်ပယ်ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ဦးဇင်းတို့အနေနဲ့ကတော့ မွန်သံဃာတော်တစ်ပါးအနေနဲ့ရော၊ မွန်လူမျိုးတစ်ယောက်အနေနဲ့ရော အထူးပင်ဝမ်းနည်းမိပါတယ်”ဟု မွန်အမျိုးသားရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ ဆရာတော် ဦးဥက္ကံသက မိန့်ကြားသည်။ ဒေါက်တာ မင်းစိုးလင်းသည် ပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံရေးအတွေ့အကြုံပြည့်ဝသူဖြစ်သလို မွန်ဝါရင့်နိုင်ငံရေးသမားတစ်ဦးလည်းဖြစ်ကြောင်း ဆရာတော်က မိန့်ဆိုသည်။ “နောက်ပြီးတော့ ရွေးကောက်ပွဲတိုင်းကို သူမီခဲ့တယ်။ အဲဒါကြောင့် ဒေါက်တာမင်းစိုးလင်းရဲ့ နိုင်ငံရေးအတွေ့...
Public Voice July 20, 2017
မွန်ပြည်နယ် အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်း ကွန်ရက်မှ လူငယ်ရေးရာ တာဝန်ခံ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်လဲ့မြင့် မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေး ရရှိရေးအတွက် စွန့်လွှတ်စွန့်စား တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သော အာဇာနည်ခေါင်းဆောင် ကိုးဦး လုပ်ကြံ သတ်ဖြတ်ခံရ၍ ကျဆုံးခဲ့သည်မှာ ယခုနှစ်ဆိုလျှင် နှစ် ၇၀ ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်နေ့ နံနက် ၁၀...
မွန်ပါတီများ ပေါင်းမလား ပျောက်မလား
Ethnic Voice July 20, 2017
သံဖြူဇရပ်မြို့နယ် မွန်လူငယ်အဖွဲ့မှ မင်းစိုးမြင့် “၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲတုန်းက ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ တစ်ပါတီပဲဝင်ပြိုင်ပြီးတော့ မွန်ပြည်နယ်မှာ မွန်ပါတီ ပဲ အစိုးရအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဖြစ်မလာခဲ့ဘူး”ဟု မင်းစိုးမြင့်က ပြောသည်။ မွန်နိုင်ငံရေးပါတီများ အချင်းချင်း စည်းလုံးညီညွတ်မှုရှိစေရန် ပူးပေါင်းစေလိုကြောင်း ပူးပေါင်းနိုင်မှုမရှိလျှင် လည်း ရွေးကောက်ပွဲကာလတွင် မဲဆန္ဒနယ်ညီတူညီမျှခွဲပြီး ဝင်ပြိုင်စေလိုကြောင်း သူကတိုက်တွန်းသည်။ “ဒီနှစ်နည်းမှာ...
Ethnic Voice July 15, 2017
မွန်ပြည်နယ်အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများကွန်ရက် ညှိနှိုင်းရေးမှူး မင်းအောင်ထူး “ကျွန်တော်တို့မှာ တစ်ညအတွင်း ဆိုင်ကယ် ၄ စီးပျောက်တယ်။ ပျောက်တော့ သက်ဆိုင်တဲ့ရဲစခန်းမှာ အမှုဖွင့်တယ်။ သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူရဲတွေကလည်း လာရောက်ကြည့်တယ်။ အခုနောက်ပိုင်းမှာလည်း သတင်းအစအနပျောက်သွားတဲ့ဟာမျိုး ရှိတယ်။ တစ်ဖက်မှာလည်းပဲ ဖမ်းမိတာတွေတော့ ရှိတာပေါ့လေ။ ဒါပေမဲ့ ခြုံပြီးပြောရမယ်ဆိုရင် အဲဒီလိုမျိုးစုံစမ်းဖော်ထုတ်မှု လုပ်တဲ့နေရာမှာ အားနည်းတယ်လို့ယူဆတယ်”ဟု မင်းအောင်ထူးက...
“တိုင်းရင်းသားတွေက ငြိမ်းချမ်းရေးကို လိုချင်တယ်”
Ethnic Voice July 1, 2017
“၂၁ ရာစု ပင်လုံညီလာခံတက်ခဲ့တဲ့ကိုယ်စားလှယ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ သုံးသပ်ရမယ်ဆိုရင် ညီလာခံမှာ ပါဝင်သင့်တဲ့သူတွေ အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံး မပါဝင်နိုင်ခဲ့ဘူး”ဟု မွန်အမျိုးသားပါတီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး နိုင်လယိတမက ပြောကြားသည်။ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများက NCA လက်မှတ်မထိုးထားသည့်အတွက် အထူးဖိတ်ကြားခံရသူ အဖြစ် ဖိတ်ကြားခံရပြီး ကိုယ်စားလှယ်အနေနှင့် ဖိတ်ကြားမခံရသည့်အတွက် ဆွေးနွေးခွင့်မရှိခဲ့သည့်အပြင် NCA အရ အမျိုးသားအဆင့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲများကိုလည်း...
Public Voice July 1, 2017
ဇင်းကျိုက်ရေတံခွန် အပန်းဖြေစခန်း လုပ်ငန်း ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးထွန်းထွန်းနိုင် နှစ်စဉ် လူသေဆုံးမှုများရှိနေသည့် ပေါင်မြို့နယ်ရှိ ဇင်းကျိုက်ရေတံခွန်ကို ပြီးခဲ့သည့်နှစ် ဇွန် ၃၀ ရက်က ကျင်းပသော ဒုတိယအကြိမ် မွန်ပြည်နယ် လွှတ်တော် ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် အရက်ကင်းမဲ့ဇုန်အဖြစ် လွှတ်တော်တွင် အတည်ပြုဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ အရက်ကင်းမဲ့ဇုန်အဖြစ် ဖော်ဆောင်ရန်အတွက် ရေတံခွန်အနီး အရက်ဘီယာရောင်းနေသော...
Public Voice June 24, 2017
ဖွံ့ဖြိုးရေး မဏ္ဍိုင်အဖွဲ့မှ ဒေသဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းရေးမှူး မင်းဝင်းဗိုလ် မွန်ပြည်နယ်အတွက် လစ်လပ်နေသည့် စည်ပင်သာယာရေးနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီး ဦးမင်းကျော်လွင်ကို ဇွန် ၈ ရက်က ကျင်းပသော ဒုတိယအကြိမ် မွန်ပြည်နယ် လွှတ်တော် ဆဋ္ဌမပုံမှန် အစည်းအဝေးတွင် အတည်ပြုခံအပ်ခဲ့၍ ဇွန် ၁၂ ရက်တွင် ဝန်ကြီးအဖြစ် ကျမ်းသစ္စာကြိမ်ဆိုပြီး...
Ethnic Voice June 22, 2017
မွန်လူငယ်ပညာပေးရေးအဖွဲ့(MYEO) လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး မင်းစိုက်ရော့ဒ် “ကျွန်တော်တို့ ပညာပေးလုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ ဘာတစ်ခုကို လေ့လာမိလည်းဆိုရင် လူငယ်တော်တော် များများက ကိုရီးယားသင်တန်တွေ ဂျပန်တွေ တက်ပြီး နိုင်ငံခြားထွက် အလုပ်လုပ်ကြတာများနေတာကို လေ့လာတွေ့ရှိရတယ်”ဟု မွန်လူငယ်ပညာပေးရေးအဖွဲ့(MYEO)က လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး မင်းစိုက်ရော့ဒ်က ပြောကြားသည်။ ရွှေ့ပြောင်းသွားလာမှုနှင့် ပတ်သက်၍ IOM ၏ သုတေသနစာတမ်းအရ ရှမ်းပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်နှင့်...
Ethnic Voice June 15, 2017
မွန်ပြည်နယ် တောင်သူလယ်သမား စိုက်ပျိုးရေးနှင့် စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းအလုပ်သမားသမဂ္ဂ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ နိုင်အောင်မွန် “ကျွန်တော်တို့က တောင်သူလယ်သမားတွေအတွက် စိုက်ပျိုးရေး စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း အလုပ်သမား များသမဂ္ဂ မွန်ပြည်နယ်အဆင့်မှာ ဖွင့်ထားပါတယ်၊ အဖွဲ့ကလည်း မှတ်ပုံတင် ကျထားပါပြီး။ အဲဒီအဖွဲ့ကိုအခြေခံ ပြီးတော့ တောင်သူလယ်သမားတွေအတွက် အရည်အသွေးနဲ့ အခွင့်အရေးတွေ အဓိကဦးစားပေးပြီးတော့ လုပ်ဆောင်နေတယ်”ဟု မွန်ပြည်နယ်...